Fafao ny Mac manontolo dia mora kokoa sy haingana kokoa amin'ny macOS Monterey | Avy amin'ny mac aho
Ny kinova vaovao an'ny rafitra fiasa macOS Monterey dia hadinina tsikelikely taorian'ny fampisehoana azy ny Alatsinainy 7 Jona, ao anatin'ny rafitry ny WWDC. Amin'ity tranga ity dia manolotra ny rafitra fikirakirana Mac safidy tsotra kokoa hamafana ny atiny sy ny fikirana rehetra amin'ity kinova ity.
Azo antoka fa fantatry ny mpampiasa iOS sy iPad izany ... Io ihany no safidy mamela ny famafana ireo fitaovana ampiharina ao amin'ny rafitra fiasan'ny Mac. Safidy izay miseho ao amin'ny Fikirakira ary manokana kokoa ao amin'ny toe-javatra famerenana kiheba amin'ny iPhone dia misy ihany koa amin'ny macOS Monterey.
"Fafao ny atiny sy ny toerana misy anao" manome ny Mac anao afaka mamafa ny atiny rehetra ary mamela ny solo-sainanao miaraka amin'ny toeran'ny ozinina. Ity safidy ity dia misy mivantana ao amin'ny System Preferences. Ka ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fanindriana fotsiny eo an-tampon'ny menio ao anatin'ny System Prefers sy ny fipihana ny "Delete all content and setting" avy amin'ny menio mitete dia afaka manadio ny solosaina.
Ny famafana ny atiny sy ny fikirakira rehetra avy amin'ny Preferensi an'ny System dia manome ny mety hamafana ny angon-drakitra sy ny rindranasa napetraka ao amin'ilay rafitra, mamela anao hitazona ny rafitry ny fiasa aza. Satria ny fitahirizana dia voahidy ao amin'ny rafitra Mac miaraka amina processeur M1 na puce T2, ny "systeme" eo noho eo ary azo antoka dia "mamafa" ny atiny amin'ny fanesorana ireo lakilen'ny fanafenana.
Ity lahatsoratra ambony ity dia izay miseho mivantana ao amin'ny tranokala paoma y Amin'izany fomba izany, ity rafitra miasa an'ny Mac antsika ity dia somary manakaiky kokoa ny sisa amin'ireo rafitra fiasan'i Apple iza no afaka nanao an'io asa io nandritra ny fotoana ela.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Fafao ny Mac manontolo dia mora kokoa sy haingana kokoa amin'ny macOS Monterey